Ụbọchị My Pet » Online dịwara: Izere Being Catfished
emelitere ikpeazụ: Jan. 13 2021 | < 1
Mgbe Notre Dame si football kpakpando Manti Te'o zutere enyi ya nwanyị na Twitter ọ dịghị mgbe ọ na-enyo enyo ọbụna ihe na-abịanụ na-esote. Enyi ya nwanyị nwụrụ n'oge n'etiti ya football oge, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọ gwara a. N'ezie, ọ nọworo na catfished site maara, ahapụ Te'o obi gbawara na ihere. N'ihi na ndị na-amaghị ihe "catfishing" bụ, ọ bụ mgbe a onye online eme na ha bụ onye ha na-adịghị ma nata ha ego ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke unsuspecting tara. Na 2011, na FBI-eme atụmatụ na gburugburu $50.4 nde e furu catfishing scams pụta ìhè na ogo nke atụmatụ a.
Olee otú iji chebe onwe gị site na catfishing scams
Catfishing bụ mfe ịmata nanị site achọ ihe na-adịghị ka dakọtara elu. Ọtụtụ mgbe, a cat Fisher ga akọ akụkọ ndị na nanị amakọghị. Ọzọ oké ụzọ ntụpọ a adịgboroja profaịlụ bụ ịjụ enyi ma ọ bụrụ na ha maara n'ezie onye (mgbe na-enyo enyo cat Fisher bụkwa enyi na ndị enyi gị online). Ọ bụrụ na onye ọ bụla ị maara ka mgbe zutere onye ọ bụ eleghị na ha na-adịghị onye na ha na-ekwu na ha bụ ndị. Ọ bụ mgbe a ezi echiche ma ọ bụrụ na ị na-eche dị ka ị na-ịbụ cat fished iji kwado elele a onye akụkọ ihe mere eme na dị nnọọ ahụ ma ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ ihe ọ bụla ọmụma na ha.
Mụta ihe banyere catfishing na mmebi ọ pụrụ ime ka a na izi graphic si instantcheckmate.com.
Izere Being Catfished Infographic